Tselatra McQueen lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Helatra McQueen lalao
ankizivavy sy ny ankizilahy ela ny toerana tena lohateny, nitondra miaraka ny mahery indrindra, mavitrika sy mahafinaritra lalao maimaim-poana amin'ny aterineto fiara. Afaka dia milalao ny hazakazaka, izay ankoatra ny nentim-paharazana fisoratana anarana tolotra hilalao ao amin'ny fiarakaretsaka, izay maka mpandeha ara-potoana any amin'ny toerana tsara. Na hianatra ny fomba mametraka mpandeha fiara na kamiao Na izany na tsy toetrandro, miezaka ny haka bebe kokoa toerana. Mazava ho azy, dia ho hitanao Makvina - ny mahery fo ny sariitatra "fiara", izay tsy handao anao tsy misy ampahany mitsiky. Amin'ny namana, dia manapa-kevitra ny Puzzles na milalao fitaka ao an-tanàna, mampatahotra ny traktera.
Boky fanoratana fiara Disney
Fiara: Tselatra hafainganam-pandeha
Fiara 2: Grand Prix mondialy
Fiara: Extreme Off-dalana Rush
Jiro miafina McQueen
Vehivavy 2 CHROME Missions
Cars 3 fandravana Derby
Fitaingan'ny fiara 2
Fiara miafina fanalahidy
Fiara miala amin'ny fiara tsy mivoatra
Boky fandokoana fiara
Fandokoana fiara Super Fast
Puzzles amin'ny fiara
Lalao helatra McQueen tamin'ny Category:
Farany Helatra McQueen lalao
Lalao Online Rehetra Tselatra McQueen lalao an-tserasera
Ny fiara - namako!
Ao amin'ny asa vita izay misy manasa anao hilalao ao amin'ny fiara, ianao tsy maintsy hihaona ny mahery fo ny sariitatra "Cars." McQueen, Mater sy ny anjara mavitrika mitohy:
mandray anjara amin'ny fifaninanana fifaninanana, miady ho amin'ny kapoaky ny Big Ram
latsaka ao mitombina toe-javatra nandritra ny pranks
mba ho tonga hamonjy ny samy hafa
Fa, ankoatra ny lohateny ireo tsy afa-mandroso sy ny hafa lafiny fialam-boly, izay manana fiara ihany koa.
Ny lalao fiara lalao izay tsy maintsy handroaka
teo amin'ny rivotra, mankao
hantsana sy ny lalana mampidi-doza
eny-dalana na ny tanàna eny an-dalambe
ity mety foana naniraka olona ny fifaliana eo. Cars ho azy ireo dia ny toerana tena kilalao, ary tsy misy hery afaka hendahako amin'ny toerana tena tianay. Izy ireo fikarakarana sy hankamamy ny efatra-naterak'ireo kodiarantsika namana, manome azy vao nanam-potoana rehetra, dia manadino momba ny fianakaviany. Sanatria nipetraka olon-kafa ao ambadiky ny kodiarana! Ny volany rehetra mandeha amin'ny fikojakojana ny milina
vaovao farany ny Atitany
mba handrakotra ny trano varnish
ny menaka fiovana
mba hanova ny kodiarana
misintona roa fisaka sy mivelatra
ny fetra na oviana na oviana fanatsarana tonga. Eny, raha ny zavatra rehetra dia atao amin'ny saina sy noho ny fiarovana, fa indraindray mahakasika ny amin'ny tafahoatra.
ny tena mpamily na dia nandritra ny lalao an-tserasera wheelbarrow mitondra tena toy ny fitiavan-tena tompony, ary tsy hanome na iza na iza ny solosaina raha tsy taorian'ny kilalao vitsivitsy misesy. Na izany aza, amin'izao fotoana izao ny lalao manome, raha mbola nisy fiara. Eny, Raha izany isika, dia tsy hanelingelina azy, ary nalefako tany amin'ireo hisoratra anarana ao amin'ny garazy izay ny fiara no amboarina sarobidy ny fahasalamana. Ny fikatsahana kely dia ho tena tsara workout. Andramo ny mitady ny faritra rehetra amin'ny fotoana fohy, mba mialoha vorio ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fiara. Mba hanaovana izany, dia mitadiava-kodiarana fiara rehetra sy ny zava-dehibe hafa antsipirihany. Mihevitra ve ianao fa zavatra lehibe toy izany dia sarotra afenina? Ao amin'ny pataloha lehibe mpanamboatra mbola tsy mba ho hita! Io no voalohany tsipiriany io, afaka faniriana kodiarana. Aza ho diso ny mijery ao ambadiky ny baoritra, barika, fantsona teo amin'ny valin-drihana.
Ampitomboy ny fahaiza-manao ny mpamily, milalao lalao Wheelbarrows
nandritra ny lalao manaraka dia afaka milalao fiara amin'ny famoronana kokoa tari-dalana. Raha toa ianao te-handany foana Tuning ny poti, nefa aza misalasala mifidy izay tianao, dia hitanao ny marika ny fiara ka hanomboka mba hamoronana. Dia afaka mora foana mifidy loko, sy ny fampiharana, izay no tianao. Ny safidy maro, ka tsy maika ny fanapahan-kevitra. Miezaha nikapoka ny safidy rehetra ka mankanesa any amin'ny fivarotana mba handaharany ny toerana tena indrindra.
avy hatrany ny ankizy mianatra ny mametraka ny fiara ao amin'ny lalao an-tserasera fiara. Fa, raha tsaraina amin'ny hoe olon-dehibe tsy handova izany rehetra ody, dia tsy nijanona handeha roa lesona. Mifidiana ny fiara, ny kamiao, ny kamiao sy fiara fitaterana na sekoly miroso amin 'ny fitantanana. Fa ny fanombohana, mba tsy complicating ny fiainanao, miezaka ny hanao ny asa tsy ara-potoana, ary amin'ny fomba malalaka sy tsara fahitana. Rahoviana hahomby amin'ny raharaha sarotra ity, dia afaka hizaha toetra ny tenanao amin'ny lalao sarotra kokoa ranomandry ny lalana izay mampihena vahana, zavona, orana, ny oram-panala sy ny alina - fahitana, ary ny fotoana mahatonga azy tsy afaka haka aina.
miverina ao amin'ny lohahevitry ny firazanany, manomboka ny hifehy ny fiarakaretsaka, polisy na afo maotera, fiara mpitondra marary, ary ho tonga jiolahy sy, fiara ny tanàna amin'ny alalan'ny sehatra iray shootout amin'ny manam-pahefana na ny fahavalo fokon'ny.
Fa ny fiovana azo mivalona piozila. Raha misy sary dia vonona, ianareo dia hahita manaraka. Eny, ny ankamaroan'ny tanora Gamers mpamily dia tia lalao colorings, izay misy ihany koa ny endri-tsoratra avy ao amin'ny sarimihetsika "Cars."